Shayga Midab Caddaan (Shaybaar) Cabbirka walxaha D90 (μm) Ningax Daahirnimo (%) Waxyaabaha Magnetic (ppm) Mooshka （%） LOI (650 ℃) PH Fiiro gaar ah
HCD-200 Caddaan ＞ 96 60 Aad u sareeya .9 99.9 ＜ 50 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Ningax Performance Sare
HCD-400 Caddaan ＞ 96 48 Aad u sareeya .9 99.9 ＜ 50 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-200 Cadaan Cad ＞ 98 65 Aad u sareeya .9 99.9 . 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Wax-soo-saar sare oo heer sare ah
HCW-400 Cadaan Cad ＞ 98 50 Aad u sareeya .9 99.9 . 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-600 Cadaan Cad ＞ 98 25 Aad u sareeya .9 99.9 . 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-1250 Cadaan Cad ＞ 98 15 Aad u sareeya .9 99.9 . 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
Codsiga goobta caagga ah, mica wuxuu inta badan ka faa'iideystaa qaab-dhismeedka laba-geesoodka ah ee mica laftiisa, taas oo siisa saameyn xoojin fiican ee alaabada caagga ah. Waxyaabaha dabiiciga ah ee kuleylka wanaagsan, siiya waxqabadka kuleylka korantada wanaagsan ee caagga daboolka sare. Iyadoo la adeegsanayo faa'iidada ka hortagga ee xaashida mica, waxay kordhisaa ciriiriga hawada; Waxay qayb ahaan u beddeli kartaa silica, maxaa keenaya hal xal dhaqaale oo loogu talagalay walxaha isku dhafan ee caagga ah; Caabbinta xiirista iyo iska caabbinta abrasionka, waxay hagaajinaysaa adkeysiga abrasion-ka ee waara ee caagga u adkaysta caagga. Saameyn wanaagsan oo wanaagsan oo dhexdhexaad ah ayaa bixisa astaamo go'doomin wanaagsan oo loogu talagalay caaryada.
Farqiga u Dhexeeya Hantida Dhexdeeda ee Mica-da synthetic iyo Mica-ga dabiiciga ah
1. Mica-da 'synthetic mica' kuma jirto hydroxyl (OH) -, iyo iska caabinta heerkulka sare iyo xasiloonida kuleylka ayaa ka sarreysa tan mica-ga dabiiciga ah, heer kulka adeeguna wuxuu ku saabsan yahay 1100 ℃. Fluorophlogopite wuxuu si tartiib tartiib ah u burburaa 1200 ℃, heerkulka dhalaalaya ee fluorophlogopite wuxuu ku saabsan yahay 1375 ± 5 ℃. Heerkulka ugu sarreeya ee isticmaalka mica-ga dabiiciga ah: Muscovite 550 ℃; Muscovite 800 ℃ (Muscovite-ka dabiiciga ah wuxuu bilaabaa inuu ku burburo 450 ℃ ku dhowaad gebi ahaanba 900 ℃; Muscovite wuxuu bilaabaa inuu ku burburo 750 ℃, oo miisaankiisu aad u yaraado 900 above). Noocyada Mica waxaa lagu kala saari karaa kuleylka heerkulka sare ama falanqaynta kuleylka oo kala duwan.
2. Mica synthetic wuxuu leeyahay wasakhda nadiifka ah iyo hufnaanta wanaagsan. Marka laga reebo in adkeysigeedu waxyar ka sarreeyo kan mica-ga dabiiciga ah, astaamaha kale ee farsamooyinka ah, dahaadhka korantada iyo guryaha faaruqinta ah ee mica synthetic ayaa ka fiican kuwa mica dabiiciga ah. Mica synthetic ayaa gabi ahaanba beddeli kara mica-ga dabiiciga ah waana nooc cusub oo ah maaddada insulin-ta qandhada u adkaysta oo leh sifooyin gaar ah oo wanaagsan
Hore: Budada mica dabiiciga ah
Sinjirka Fluorphlogopite Mica
Dabiiciga Mica Flake
Qurxinta Mica synthetic